အပြာရောင် LEGO ကိုအနိုင်ရရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေး Creator Expert ၁၉၆၉ Fiat 77942
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 461 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၉၆၉ Fiat 10271, ၁၉၆၉ Fiat 77942, Creator Expert, Fiat 500, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego သတင်းလွှာ, အဆိုပါ LEGO Group, Zavvi
ဝင်ဖို့အချိန်ကကုန်နေပြီ Brick Fanaticsအပြာရောင်၊ အပြာရောင်အသစ်အတွက်အခမဲ့ဆုမဲ Lego Creator Expert ၁၉၆၉ Fiat 77942.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် Zavvi အသစ်ပြန်လည်ကူးယူထားသောဗားရှင်းတစ်စောင်ကိုလက်ဆောင်ပေးရန် ၁၉၆၉ Fiat 10271p ဖြစ်သည့်၊art ၏ Lego အဖွဲ့၏ UK အသစ်ကိုအာရုံစိုက်သည် ရှေ့ပြေးအစီအစဉ် ရှိပြီးသားအစုံ၏မူကွဲများကိုစမ်းသပ်ရန်
အနိုင်ရရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုနှင့်အတူသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာဤစာမျက်နှာ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ပုံစံဖြည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ။ (မင်းမိုဘိုင်းမှာရှိနေရင်စာမျက်နှာရဲ့အောက်ခြေအထိတစ်လျှောက်လုံးလှိမ့်တာကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ )
ကျွန်ုပ်တို့၏မေးလ်စာရင်းသို့ ၀ င်ပါကဤနှင့်အနာဂတ်အားလုံးကိုသင် ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် Lego ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာ၊ ဝေးကွာတဲ့နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုကနေနောက်ထပ်လက်ဆောင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်၊artကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်မှုများအတွက်စာရင်းများ၊ ဒရိုဒိုက်ကာ နှင့် 74-Z Speeder စက်ဘီးမရ။ သင်တို့သည်လည်းနောက်ဆုံးပေါ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် Lego ကနေသတင်း, အကြောင်းအရာနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို Brick Fanatics သင်၏ inbox သို့တိုက်ရိုက်အဖွဲ့ဖွဲ့ပါ။
ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ အင်္ဂလန်နေ့၊ စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၁ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ဆုမဲဆွဲရန် copy တစ်စောင်ရယူပါ ၁၉၆၉ Fiat 77942။ ဤပေးကမ်းမှုသည်လက်မှတ်ထိုးထားသူများအတွက်သာဖြစ်သည် Brick Fanatics လက်ရှိသို့မဟုတ်အားဖြင့်သတင်းလွှာ အင်္ဂလန်နေ့၊ စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၁.
ဤမဲနှိုက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသတင်းလွှာ ၀ ယ်ယူသူများအတွက်ဖွင့်သည်၊ သင်စာရင်းသွင်းသည့်အခါဗြိတိန်သို့မဟုတ်အမေရိကန်စာပို့စာရင်းတစ်ခုကိုသင်ရွေးရန်လိုလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်ထိုနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ရန်မလိုပါ။ (၎င်းတို့သည်အချိန်ဇုန်/ငွေကြေးကွာခြားချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ )
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲက Check လက်ကမ်းစာစောင်ပြန်လည်သုံးသပ် of ၁၉၆၉ Fiat 77942 လတ်ဆတ်တဲ့ဆေးသုတ်ထားတဲ့စားပွဲကစားပွဲအတွက်ဘာယူလာသလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ ၁၉၆၉ Fiat 10271.
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics စျေးဝယ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည် LEGO.com or Zavvi ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀၂၉၄ Titanic အတွက် LEGO အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအပိုင်းအရေအတွက်
LEGO သည် Queer Eye Apartment သတ်မှတ်သည် →